MUSIIBO KALE: Vinicius Junior Oo Maca-salaameeyey Garoomada – Latest Sports News
MUSIIBO KALE: Vinicius Junior Oo Maca-salaameeyey Garoomada
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa heshay warkii ugu naxdinta badnaa kaddib guul-darradii ay kala kulantay Ajax, kaddib markii lagu wargeliyey inay iska illoobaan da’yarkooda Vinicius Junior oo macasalaameeyey garoomada.
Vinicus Jr ayaa uu dhaawac soo gaadhay qaybtii hore ee ciyaarta, waxaana garoonka laga saaray daqiiqaddii 35aad, taas oo ahayd lix daqiiqadood oo kaliya kaddib markii uu baxay Lucas Vazquest.
Real Madrid oo warbixin kasoo saartay dhaawaca laacibkeedan ayaa waxay sheegtay in laga daaweeyey dhaawacii soo gaadhay kulankii xalay, kaas oo ahaa kala-goyska jilibka lugta midig.
Kaddib warbixinta dhakhaatiirta, warbaahinta El Chiringuito de Jugones ayaa sheegtay in laacibka reer Brazil uu gebi ahaanba macasalaameeyey xilli ciyaareedkan oo aanu kusoo laaban doonin garoomada.
Warkan oo sidoo kale naxdin ku ah xulka qaranka Brazil oo dhawaan lagu daray Vinicius Junior, ayaa waxa uu intaa ku daray inuu garoomada ka maqnaan doono muddo 10 illaa 12 usbuuc ah, taas oo ka dhigan inuu jiifi doono muddo saddex bilood ku dhow.
Sida ay ku warrantay El Chiringuito de Jugones, suurtogal uma aha Real Madrid inay ku xisaabtanto Vinicius Junior inta ka hadhay xili ciyaareedkan, waxaana sidoo kale uu shaki ku jiraa inuu taam u noqon doono tartanka qaramada Latin America ee sannadkan lagu qaban doono waddanka Brazil.
Inkasta oo aanay jirin rajo buuran oo Real Madrid ay qabto, xilli horena ay kasoo hadhay tartanka Copa del Rey iyo xalay oo ay Ajax soo burburisay rajadeedii Champions League ayaa waxay sidoo kale 12 dhibcood ka dambaysaa Barcelona oo haysa hoggaanka horyaalka LaLiga, taas oo marka xaaladdeeda la eego ka dhigan inay iska quusatay.
Si kastaba ha ahaatee, dhaawaca Vinicius Junior ayaa waxa uu walaac weyn ku yahay tababare Santiago Solari oo dagaalka kaliya ee u hadhay inuu u halgamo sidii ay kooxdu uga qayb-geli lahayd tartanka Champions League ee xili ciyaareedka dambe.